သောမတ် အယ်လ်ဗာ အက်ဒီဆင်[မှတ်စု 1] (အင်္ဂလိပ်: Thomas Alva Edison)သည် အမေရိကန် တီထွင်သူ၊ သိပ္ပံပညာရှင်နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သောမတ် အက်ဒီဆင်အား ၁၈၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် မီလန်၌ မွေးဖွားသည်။ အက်ဒီဆင်ကို ငယ်စဉ်၌ စာသင်ကျောင်းသို့ပို့ရာ အဆင်မပြေလှသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူက သူ့ကို နေအိမ်မှာပင် စာသင်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူဖတ်ဖို့ စာအုပ်အများအပြားကို သူ၏ မိခင်က ရှာဖွေပေးခဲ့သည်။
Thomas သည် အာရာမေးယစ်ဘာသာစကား (Aramaic) ၏ အမည်တစ်ခုဖြစ်၍ နောက်ပိုင်းကာလများတွင် ဥရောပဘာသာစကားများသို့ ရောက်ရှိပြန့်နှံ့လာသည့် ရေပန်းစားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်ကာ အသံထွက်အားဖြင့် 'Tomas' (တော/ထော မတ်စ်) ဟူ၍ ထွက်လေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် မြန်မာ၌ အသံဖလှယ်ရာတွင် 'th' ကို 'သ' သံအဖြစ် လွဲမှားဖလှယ်ခဲ့သောကြောင့်​ သောမတ်(စ်) ဟူသော စကားလုံးဖြင့် ရေးသားလေ့ရှိကြသည်။ ဤစကားလုံး၏ အတိုကောက်စကားလုံးမှာ 'Tom' ဖြစ်၏ ။ Edison တွင်လည်း မူလအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများသည် စကားလုံးအချို့၏ သရသံများကို schwa (〈ə〉) ဖြင့်သာ ရွတ်ဆိုသောကြောင့် "အက်ဒီဆင်" (⟨ɪ⟩) ထက် အက်ဒစ်ဆန် (ဆာန်) က ပို၍ နီးစပ်သည့်အသံဖြစ်သည်။
"The alphabet of success"၊ The Economist၊ September 15, 2016။ September 16, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Thomas Edison Dies in Coma at 84; Family With Him as the End Comes; Inventor Succumbs at 3:24 A.M. After Fight for Life Since He Was Stricken on August 1. World-Wide Tribute Is Paid to Him asaBenefactor of Mankind"၊ New York Times၊ October 18, 1931။ "West Orange, New Jersey, Sunday, October 18, 1931. Thomas Alva Edison died at 3:24 o'clock this morning at his home, Glenmont, in the Llewellyn Park section of this city. The great inventor, the fruits of whose genius so magically transformed the everyday world, was 84 years and 8 months old."
Benoit၊ Tod (2003)။ Where are they buried? How did they die?။ Black Dog & Leventhal။ p. 560။ ISBN 978-1-57912-678-0။